Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: ARAAROO;Kora hogganootaa kan Atlanata ilaalchisee atakaaroon lafa jala eegalte as baatee arginee jirra. Wanni jennu;
ARAAROO;Kora hogganootaa kan Atlanata ilaalchisee atakaaroon lafa jala eegalte as baatee arginee jirra. Wanni jennu;
Kora hogganootaa kan Atlanata ilaalchisee atakaaroon lafa jala eegalte as baatee arginee jirra. Wanni jennu;
1) Korri kun akkuma karoorfameen Sadaasa 11-13, 2016 ni godhama. Kana waca dhiisii duutis hin hanqiftu!
2) Kora kanarratti jaarmayoonni siyaasaa, hawaasaa fi amanti cufti affeeramanij jiran. Warri affeerraan hin gayin tarii imeelii dogongoraatti ergame waan ta'eef imeelii sirrii nuuf ergaa jettee jirti koreen qopheessituu.
3) Jaarmayootatti dabalatee manguddoo biyyaa, gameeyyii qabsoo kkf afferamanii jiru. Dabalataan namni hirmaachuu fedhu yoo jiraate imeelii fedha isaa/ ishii agarsiisu erguu qofaa hirmaachuu akka danda'u ibsamee jira. ( kanaa ol akkamiin inclusive ta'a laata?)
4) Warri kaayyoon takkaahuu adeemsi qophii kora kanaa isiniif hin galiin gaafii kaasun sirriidha. Koreen qopheessituus deebisuu dirqama qabdi. Deebisaas jirti. Warri deebii isaanitti hin quufin qeequu yoo filattan sunis mirga uumaan isiniif laatte. Qeeqa keessan qalbiin godhaa. Inumaatuu mee kora sanittuu fidaa jila hogganootaa durattis dhiheeffadhaa. Yoo san dadhabdan karuma isiniif aanjayeen itti fufaa!
5) Warri akeekni, kaayyoofi adeemsi kora kanaa isiniif hin taane kora biraa qopheessaa. Yoo haajamtan nu gaafadhai sin gargaarra. Dhufneetis ni hirmaanna. Dubbiin saba keenyaa marii kora tokkootin hin goolabamtu. Kora hedduutu godhamuu qaba. Dhimma kora tokkoon furuu dadhabne kan itti aanuuf bulfanna.
6) Lakki wanni nu jenne ta'uu baannaan korri kun hafuu qaba warri jettan hin xaarinaa. Oromoon zamana kana waan eegalte jidduun dhaabuu dhiistee jirti. Duula "Oromo First" osoo gamaa gamanaa gufuun tuulamtu irraan dabarree milkaa'inaan goolabne. Akeeka OMN dhaabuu osoo bitaa mirgaa nutti duulaniifi keessaa harca'an jaarre. Gariin erga jaaramees ifaafi dhoksaan diiguuf wixxifatee ture. Sanis hojiin irra aanne. Warri harca'es gariin deebi'ee adda durummaan itti fayyadama jira.:) Maqaa#OromoProtests jedhuun duula qabsoo biyyatti dhooye gargaaruuf godhamaa tures jalqabarratti kan dura dhaabbateefi xiqqeessaa ture hedduu. Takka radical nuun jedhu takka Itoophiyaatti jijjiira jedhu, ykn ummata wayyaaneen fixxeef nu balaaleffatu. Nama diinni ajjeese ragaa suuraa waliin keenyaan kan nu balaaleffates hedduudha. Kana hunda interneetin waan itti biifan hin lakkifne galmeessee seenaaf kaahee jira. Qeeqaan muufannee, arrabsoon dallannee, hamiin qalbii cabnee of duuba hin deebine. Ciniinnannee dirqama keenya gahuumsaan baane. Ammas itti fufna.
Waliigalatti korri Atlanta Oromoo cufaafuu banaadha. Yoo dandeessan irraa hin hafinaa. Yoo hin dandeenye eebbisaa. Lakki yoo jettanii dhagaa haruu filattanis dhakaa jajjabaa as darbaa. Akkuma amma duraa dhakaa san walitti qabnee Waan Oromoof ta'u wayii ittiin jaarra..:)
Posted by Hasan Ismail at 5:46 AM